विवाहित महिलाले सिन्दुर लगाउन किन जरुरी छ ? जान्नै पर्ने यी कुरा – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/विवाहित महिलाले सिन्दुर लगाउन किन जरुरी छ ? जान्नै पर्ने यी कुरा
विवाहित महिलाले सिन्दुर लगाउन किन जरुरी छ ? जान्नै पर्ने यी कुरा
काठमाडौँ । पछिल्लो समय परिवर्तित फेशन र व्यस्त समयका कारण विवाहित महिलाले सिन्दुर लगाउन मन गर्दैनन्। तर तपाईलाई थाहा छ, सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँदा फेशन हैन, यसले जीवनम निकै महत्व राख्ने गर्दछ।महिलाले सिउँदोमा लगाएको सिन्दुरले तपाईको भाग्य बनाउने पनि गर्दछ भने बिगार्ने पनि गर्दछ। आज हामी तपाईलाई सिन्दुर लगाउँदा ध्यान दिनु पर्ने केही कुराका बारेमा जानकारी दिदैछौँ।
सिउँदोको यो भागमा नलगाउनुहोस् सिन्दुर
शास्त्रका अनुसार जुन स्त्रीले सिउँदोको बीच भागमा सिन्दुर लगाउनुको साटो किनारामा सिन्दुर लगाउने गर्दछ, उनीहरुको पतिसँग सधै मनमुटाव हुने गर्दछ।** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
कपालले लुकाएर सिन्दुर लगाउनु
धर्मका अनुसार जुन स्त्रीले आफ्नो कपालमा लुकाएर सिन्दुर लगाउने गर्दछ, उनको पतिको मान सम्मान मानिससँग लुक्ने गर्दछ। कडा मेहनत गर्दा पनि उनीहरुको पतिलाई मान सम्मान प्राप्त हुँदैन्। त्यसैले सिन्दर लामो र सबैले देख्नेगरी लगाउनु पर्दछ।
सिन्दुर लगाउने समय विवाहित महिलाको हातबाट सिन्दुरको डिब्बा जमिनमा खस्छ भने त्यसलाई अशुभ मानिने गरिन्छ। यसो हुँदा उनीहरुको पतिलाई कुनै नोक्सान पुग्ने गर्दछ।
सिन्दुरलाई महिलाको सोह्र श्रृगारको महत्वपूर्ण स्थान मानिने गरिन्छ। सिन्दुर लगाउँदा महिला स्वास्थ मात्र हैन सुन्दर पनि देखिने गर्दछन्। सिन्दुर जीवनको कति महत्वपूर्ण छ भने यो बाट थाहा हुने गर्दछ की सिन्दुर बिना कुनै व्यक्तिको विवाह पुरा हुँदैन्।
चाडै चाउरीने समस्या हुँदैन्
सिन्दुरमा पारा जस्तो धातु अधिक हुने हुँदा अनुहार चाडै चाउरी पर्ने समस्या हुँदैन्। साथै यसले स्त्रीको शरीरमा निस्किने विद्युतीय उत्तेजनालाई नियन्त्रणमा राख्ने सहयोग गर्दछ।
मनमा शान्ति हुने गर्दछ
वैज्ञानिक दृष्टीका अनुसार स्त्रीले सिन्दुर लगाउँदा मनमा शान्ति हुने गर्दछ। सिन्दुरले रक्त संचारका साथसाथ यौन क्षमतालाई पनि बढाउने गर्दछ।** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
घोडा सँगको ‘से क्स’का कारण ज्या’न गुमाएकी थिइन् यी माहारानीले !
आँखाको डार्क सर्कल हटाउन अपनाउनुहोस् यस्ता घरेलु उपाय !